Aostralia: Fitarainana Hafahafa Avy Amin’ny Mpitrandraka Harena An-kibon’ny Tany Momba Ny Tsikombakomban’ny CIA – Resaka Arintany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2012 15:08 GMT
Tamin'ny fomba “hafahafa” mitroatroatra no nahatafiditra an'i Clive Palmer, mpitrandraka harena an-kibon'ny tany, ho ao anatin'ny laharan'ireo mpisaina ny firaisana tsikombakomban'ny CIA tamin'ity herinandro ity nandritry ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana tao amin'ny fanjakan'i Queensland. Nifaly aok'izany ireo bilaogera Aostraliana tamin'ny fiampangàny ny famatsian'ny CIA vola ny kandidàn'ny Green sy ny fikambanana toy ny Greenpeace.
Namintina ny Klioba Troppo an'i Don Arthur :
Niatrika ny haino aman-jery ny mpitrandraka harena an-kibon'ny tany Clive Palmer ny Talata ary nilaza fa mampiasa ny Rockefeller Foundation ny Sampam-pitsikilovana Amerikana (CIA) hamatsiana ny fampielezan-kevitra mba hisongonana ny orinasa Aostraliana mpitrandraka arintany.
Ny fisavoritahany mivandravandra eo amin'ny Foundation sy ny Famatsiambolan'ny Fianakaviana Rockerfeller dia nitondra nankany aminà karazana fifanaratsiana sy fifanesoana avy amin'i JD Lang ao amin'ny Independent Australia tamin'ilay teny hoe ‘mpanefoefo i Clive Palmer ka tokony hihaino azy isika‘:
Maha-te hanilika ireo sahoan-dresaka mampisalasala ireo ho toy ny hadalàna mahatsikaiky avy amin'ny olona hafahafa sy very saina tanteraka izy ity; antsoantson'olona adala tsy misy dikany sady mampihomehy izay marary saina tanteraka, tena tsy fananana fahalalàna amin'ny lafiny rehetra, ary manana atidoha tsy mivoatra mampalahelo mihitsy.
…Tsy ho lasa tena, tena, tena, TENA mpanan-karena ianao amin'ny fiainana eo amin'ny tontolo nofinofy feno maty mitsangana sy teti-dratsy ary hoe feno “reds” hatrany ambany fandrianao izay mikaroka ny hanaisotra ny fanananao be dia be (ireo sarobidy amiko), vitanao ve? tsia mazava ho azy. (Fanamarihana: REDS eto dia anondroana ny kaominista)
Ao anatin'ny ‘tena nivoaka tokoa ny marin'i Clive Palmer‘, tahaka ny vonona via vonona mihitsy i Tory Shepherd hanohy noho ny afitsok'ireo mpanao teti-dratsy :
Mahavariana ny teti-dratsin'i Clive Palmer, kanefa tsy mampidi-doza. Isaky ny misy olona manana ny toerany manao tsinontsinona ny foto-javatra, dia maty ny hany fahamarinana kely mba misy.
Manana ny mpanohana azy i Palmer. Ny “Marina ny an'i Baranaby” dia tsy matoky ny mpampahalala vaovao hilaza ny tena zava-misy marina:
Izaho kosa aloha tsy hampilefitra ny lohaliko aminà sary fanandratan-tena sy mampiseho fanivaivàna tahàka izao, fandoavana ranon'afero, ary fanosihosena ny maha-olona.
Tahàka ny mpanao gazety maro.
Liana be aho ny hanaraka, ny hanapa-kevitra irery raha misy votoatiny ny fitarainan'i Palmer.
Indrindra indindra moa rehefa ny fikarohana nataoko nandritry ny taona maro no mitarika hisaina fa mety misy marina na dia kely ihany aza tamin'izay nolazainy.
Any amin'ny Pure Poison, miasa loha ihany koa i Dave Gaukroger mikasika ny haino aman-jery, kanefa amin'ity indray mitoraka ity dia ny tsy fahampian'ny fandrakofam-baovao nataon'ireo sehatra Murdoch :
Rehefa olo-malaza iray, malala-tànana manana ny maha-izy azy sy mpanohana ny iray amin'ireo antoko politika goavana no manao fanambarana fa ny sampam-pitsikilovana avy amin'ny firenena matanjaka iray no hiantsoroka ny fanaovana fampielezan-kevitra manohintohina ny tombontsoa manokan'ny Aostraliana dia hieritreritra ianao fa izany no tena vaovao lehibe. Saingy toa tsy izany kosa raha vao i Clive Palmer ilay olona.
I Colin avy ao amin'ny whatintheworld dia matahotra momba fandrindràna manerantany iray hafa, nampiditra ny Firenena Mikambana ho ao anatin'ny fanentanana miafin'ny CIA:
Ny Carbon Tax na ny hetra amin'ny arintany no niantombohan'izany rehetra izany ary hitohy izany mandram-pahatongan'ny harena rehetra sy ny orinasa ho eo ambany fitsipika sy fitantanan'ny Firenena Mikambana amin'ny anaran'ny maharitra.
Tsy maintsy nanaraka an'i Colin ny Watching the Deniers noho izy mahita zotran-dàlana mitovy amin'ny rivotra iainana feno ahiahin'i Palmer:
Ny fisainana teti-dratsy sy ny tahotra ny “sasany” dia mamàka lalina dia lalina ao anatin'ilay hetsika fandavana.
Ireo tomponà banky manerantany, ny siantifika, ny Firenema Mikambana, ny francs-maçons, ny Greens sy ny sosialista dia mitetika ny hanjaka manerana izao tontolo izao ary hampidina ny fari-piainantsika ho toy ny tamin'ny fahagola.
Sariitatra avy amin'i New Matilda: natolotry Fiona Katauskas
Ny fitakian'i Palmer dia niteraka fitomboan'ny isan'ireo tsikombakomba hafa mifandray amin'ny hery politika. Manana toerana lehibe izy eo amin'ny politika amin'ny maha-mpikatroka mafana fo sy mpamatsy vola matanjaka ny Antoko Liberaly sy Nasionaly azy. Tena nafana fo mihitsy izy tamin'ny fanoherany ny hetra amin'ny Tombombarotra Azo amin'ny Fitrandrahana Harena Ankibon'ny tany nataon'ny governemantan'i Gillard. Mikasa ny hanao fanamby amin'ny Fitsarana Avo izy momba ny lalàna'ity farany mametra ny vidinà arintany.
Ny voalaza ho fampiasany fahatany sy ny dindony eo amin'ny dingana ara-politika no nahatonga taim-bava ratsy teo amin'i Wayne Swan, Mpitambola Federaly sy Piraiminisitra Lefitra. Ao amin'ny bilaogy akademika The Conversation dia mazava be ny ahiahin'i Jean-paul Gagnon hoe miteny tafahoatra ny vola:
Misy ahiahy mafy dia mafy eo amin'ireo manam-pahaizana manoloana ny fidiran'ny vola an-tsehatra, ny zo manokana efa azo, ary ny sasa atidoha ataon'ny vondron'orinasa amin'ny ankamaroan'ireo governemanta môderina.
… Ny toerana misy an'i Swan dia mifandraika kokoa amin'ny fomba fijery lalim-paka iraisam-pirenena mifototra amin'ny maha-olona ary ny demokrasia. Tsy manara-dalàna i Palmer ary ny fanamarihany dia mikiky tsikelikely ny herin'ny vola, ny “matérialisme” amin'ny fara-tampony sy ny fitiavam-bola tsy misy ilàna azy.
Fanampin'izany, niverina indray ny fiampangàna ny CIA ho nitsabaka tamin'ny politikan'ny Oz toy izay nolazain'i Don Arthur taminà gazety ara-kolontsaina an'ny elatra havanana:
Satria hita fa tsy misy porof mihitsy ny famatsian'ny CIA ny vondrona Green Aostraliana dia nisy fikambanana Aostraliana iray fantatra fa nandray ny famatsian'ny CIA — Quadrant magazine.
Ny tenifototra #clivepalmer tao amin'ny Twittter koa dia napetraka ho fanampin'ireo petra-kevitra momba ny tsikombakomba, miaraka aminà fandraisana anjara tsy matotra marobe.
Nony farany dia namoaka lahatsarinà tantara tsangana momba ny valin-kafatry ny CIA ny fikambanana fisoloana vava ety aty aterineto GetUp! :
Satria hoy ry zareo : Ny tsikombakomban'olona iray dia zaava-misy marina momba ilay olona.